Kedu ike ọkụ iku: ndụmọdụ kachasị mma | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Kedu ike nke ìhè iku
Kedu mgbe anyị ga-ahụ ihe ike nke iku iku, Ọ dị mkpa ịmara ọrụ niile na ya ka anyị wee ghara imefu anyị ma nwee mmefu na-enweghị isi ma ọ bụ daa na nke ahụ na-eduga na-awụkarị elu. Knowingmara ihe ike nke ọkụ iku dị mkpa na-emefu naanị na anyị larịị nke ìhè na imefusị obere ọkụ eletrik.
Yabụ, n'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji mụta ike nke ọkụ ịgbazite.
1 Gịnị bụ ike eletriki
2 Ọtụtụ mgbe ẹbụp ajụjụ banyere ihe ike nke ìhè iku
3 Iwu iji mụta ike nke ìhè iku
4 Andnye na otu esi ahọrọ ike
Gịnị bụ ike eletriki
Iji mụta ihe ike nke iku iku, anyị ga-ebu ụzọ mara ihe echiche a pụtara. Ike bụ ike nke ewepụtara ma ọ bụ rie maka oge ọ bụla. Enwere ike tụọ oge a na sekọnd, nkeji, oge, ụbọchị ... na ike tụrụ na joules ma ọ bụ watts.
Mmekọrịta sitere n’ike na ike bụ ọnụego nke ike na-eri. Nke ahụ bụ, otu esi atụ ike na joules nke ejiri otu oge. Joule ọ bụla na-ere kwa elekere bụ otu watt (watt), yabụ nke a bụ njiri maka ike. Ebe ọ bụ na watt bụ obere nkeji, a na-ejikarị kilowatts (kW) eme ihe. Mgbe ị hụrụ ụgwọ maka ọkụ eletrik, akụrụngwa na ihe ndị ọzọ, ha ga-abata na kW.
Ọtụtụ mgbe ẹbụp ajụjụ banyere ihe ike nke ìhè iku
Offọdụ n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị mgbe ọ dị mkpa ịmata ihe ike nke ọkụ iji were ụgwọ metụtara ugboro ole ndị na-eduga na-awụlikwa elu mgbe enwere oriri dị iche karịa ka ọ dị na mbụ ma ọ bụ n'ihi na enweghị ọkụ ma ọ bụrụ na anyị ejikọ ọtụtụ eletriki ngwa n’otu oge.
Ma ọ bụ na ịza ajụjụ ndị a niile ọ dị mkpa iji zoo aka na ọnụ ọgụgụ nke ngwa eletriki dị n'ụlọ anyị. Ekwesiri iburu n'uche na ike eletrik na-adabere n'ọtụtụ ihe. Inwe ulo buru ibu ma obu pere mpe adighi mkpa, ebe obu enwere ike ibi na nnukwu ụlọ nwere obere akụrụngwa. Ihe ọzọ nwekwara ike ime. Ulo nwere ike inwe akụrụngwa eletriki zuru oke yana obere ala ma chọọ ka enwee ikike ọzọ.
Knowmara ike nke ọkụ iku iku mkpa ka ị mara ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị ị nwere n'ụlọ gị gị ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya ma ọ bụ n'otu oge ahụ.
Iwu iji mụta ike nke ìhè iku
Anyị ga-ahụ ihe bụ iwu mbụ na nke bụ isi a ga-elebara anya ịmara ike nke ọkụ iku.
Ike ọkụ eletrik nke nkwekọrịta dị elu, nke ka elu na ego a ga-akwụrịrị. Nke a bụ ihe dị mkpa iji buru n'uche ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịgafe ọkụ eletrik arụpụtara ebe ọ bụ na anyị ga-akwụkwu ụgwọ. Echiche bụ ịmụtakwu ma ọ bụ pere mpe ego ị ga-akwụ ma were ụgwọ ihe dị mkpa iji mejuo ọkụ eletrik ahụ kwuru.
Inwe ikike pere mpe apụtaghị na anyị ga-enwe nnukwu ego. O doro anya na maka kW ọ bụla ị ga-agbadata na ị ga-echekwa euro 50 kwa afọ. Agbanyeghị, ihe niile ma ọ bụ nchekwa ga-apụ n'anya ma ọ bụrụ na ị daa n'iji ọtụtụ ngwa ọrụ n'otu oge. Onweghi onye choro iji oge obula gabiga igbe nbata ebe ICP na-awuli elu. Na-agbapụ ọkụ site na ịgbanye oven n'otu oge ị na-etinye igwe ịsa ahụ na nke a nwere ike ịdị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na ọ na-eme ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na nke a emee, a ga-enwerịrị ike nkwekọrịta, ọ bụrụgodi na ọ ga-efu m obere ego. Chekwa mbelata ikike nkwekọrịta nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na inyochaghị ha nke ọma.
Ozi bụ ike na agbanyeghị na ị nwere ike ikpebi ihe ị ga-akwụ ụgwọ, ọ dị mkpa ịmara nke ọma. Enwere oke akara maka ebumnuche nchekwa mgbe ị na-abawanye ike. Ya bụ, ọ bụghị nrụnye eletrik niile na ụlọ niile na-akwado ike dị elu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ karịa oke enyemere, ị ga-emezigharị nwụnye kpamkpam. Ma ọ bụghị ya, ihe ọghọm na-achọghị nwere ike ime.
Abia na ibelata ike, i nwekwara okwu ikpeazu. Agbanyeghị, ekwesịrị ịmara na ọ bụrụ na ị daa n'ike, ị ga-abụ onye nwere nsogbu niile gbasara ya. Nwere ike wedata ma ọ bụ bulie ike dịka ịchọrọ, ọ bụrụhaala na a chọtara ọtụtụ 0.1 kW. Ọ bụrụ n’ikpeazu iwetulata ike nkwekọrịta gị, ụgwọ nke ibulite ya ọzọ ga-apụta na ejirila ego niile eme ihe n’efu.
Andnye na otu esi ahọrọ ike
Ndị ahịa na-ahụ maka ikwenye na ụlọ ọrụ na ikike ịgbazite ọrụ. Ihe kachasị mma bụ na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-eme nkwenye dabere na ntinye ya na ọnụọgụ nke ngwa ya. Na njedebe, ị bụ onye nwere okwu ikpeazụ ma ị nwere ike ịgbazite ego ịchọrọ. Ekwesiri onye nkesa ịnabata otu mgbanwe na ike eletrik kwa afọ, ọ bụ ezie na enwere ike gbanwee ya dịka mkpa gị. O doro anya na ịnweghị ike ịgbanwegharị ikike nkwekọrịta ya kwa ọnwa.
Iji chọpụta ma ị na-ego ọrụ, e nwere otu aghụghọ na-anaghị ada ada. Gbanye ngwa eletriki niile dị n'ụlọ gị n'otu oge. Y’oburu n’etiti ngwa ndi a ichota ite oku, igwe nkpu oku na ihe nhicha, ma ka ICP adighi amali elu, o nwere ike buru na inwee ikike di oke. Oge ị ga-ejikọrịrị ọtụtụ ma ọ bụ ngwa eletriki niile n'otu oge n'ụlọ gị dị ole na ole ma ọ bụ efu. Kwesighi ịdị njikere maka ya. Na-akwụ ụgwọ maka ihe ị na-ejighị ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị naghị eji. Ihe niile a ga - egosipụta na ụgwọ ọkụ eletrik.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ike nke ọkụ ịgbazite ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Kedu ike nke ìhè iku
Recycled Christmas ịchọ mma